Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Taribo West Child Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
LB na-egosi Full Story of a Football Legend best known by the nickname; "Pastọ". Ụmụ akwụkwọ akụkọ Taribo anyị nke dị na nwata na akụkọ ihe omume na-ewetara gị akụkọ zuru oke site na nwata ruo ụbọchị. Ọ bụ ihe gbasara akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, akụkọ ihe mere eme, otú o si ghọọ pastọ na ọtụtụ ndị na-eme ihe gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla na-echeta ya maka ejiji ejiji ya na ụbọ akwara. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Taribo West's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Ndụ mbido
A mụrụ Taribo West na 26th nke March 1974 na Port Harcourt, Nigeria. Dị ka ọtụtụ ndị na-eto eto ndị Niger ga-aga Lagos mgbe ha dị afọ iri na ụma, otú ahụ ka West. Mgbe ọ rutere Lagos, West gbalịsiri ike ijide ọtụtụ ọrụ ndị nwụrụ anwụ na ógbè Shomolu, nke dị ize ndụ, nke ndị West na-atụle na Bronx, New York City. N'okwu ya ...
'A maara òtù ndị nọ n'ógbè ahụ dịka Ụmụaka Mpaghara. Gị na ha ma ọ bụ megide ha, echekwara m na ọ ga-aka mma ka ha bụrụ enyi dịka ndị iro. Ihe nkwụsịtụ, ọgụ, ọgwụ ọjọọ na mgbochi bụ iwu nke ụbọchị ahụ. Anyị ga-egbu ndị mmadụ n'amaghị ama n'okporo ámá. '
N'ebe ọdịda anyanwụ na Lagos ka ọ na-enweta ụgwọ ọrụ nke mpụ dịka ọ bụ onye òtù nzuzo. O kwusiri ike n'ịgba bọl n'okporo ámá. Ekem ... Otu ụbọchị, ka ya na ezigbo enyi ya laghachiri n'okporo ámá tinyere akpa nke ego ezuru, otu onye òtù nke ndị na-asọ mpi na-abịakwute ha, bụ ndị choro ego ahụ. Mgbe a lụsoro òtù ndị a ọgụ karịa ego. Enyi nke West jụrụ inyefe akpa ego. O wee tụọ ya na onye enyi ya West na-enweghị ike inyere ya aka.
Taribo West gbara ọsọ na ndị ego wee laghachikwuru nne ya na Port Harcourt. Mgbe ọ hụrụ akụkụ ọjọọ nke òtù ndị omempụ, o kpebiri itinye ume zuru ezu na football.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Na-eto Eto
Na Port Harcourt, West malitere na Obanta United. Mgbe emechara ndị Fans na-eme egwuregwu na West, e mesịrị chọpụta Monday Sinclair onye scout na-akpọ ya ka ọ kpọọ maka otu ụlọ ọrụ egwuregwu Sharks. Ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ na Obanta United na 1989, tupu ịlaghachi na Sharks na 1990. Site na Sharks, ọ gara na-egwu maka Enugu Rangers na 1991, tupu iso Julius Berger na 1992 dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Mgbe o nwesịrị ule na-aga n'ihu n'oge 1993, West abanye na French nke Auxerre nke Guy Roux duziri. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye so n'òtù egwuregwu Olympic nke meriri nrite ọlaedo na 1996 Summer Olympics. West na-egwuri egwu ọ bụla n'otu oge nke asọmpi ahụ. Ngwunye ya na-acha odo odo ghọrọ akara aka maka onye na-akwadoghị ihe efu. Ọ bụ ntutu ị pụrụ ịhụ n'akụkụ nke ọzọ nke pitch.
Dika ntutu isi ya mere ihe di ebube, otua ka ihe siri ike ya na barnstorming di elu karia mgbe o kpere maka obodo ya.
Imeri Olympic na-edu Inter Milan ka ọ kpọọ maka ọrụ ya. Na Inter, ọ na-egwuri egwu Diego Simeone aKA Cholo na Ronaldo Luís Nazário de Lima.
West ghọrọ onye mmeri nke UEFA ka ọ na-eduzi oghere nchebe Nerazzurri iji merie trophy nke o kwuru na-abịa site n'ememe ndị ọ na-eji ndị dọkịta na-agba afa na Nigeria.
Mgbe ihe ịga nke ọma n'Ịtali, West kpebiri iji oge na-aga na Derby County, na-enyere aka idebe ha na Premier League, mgbe ahụ Kaiserslautern dị na Germany. Taribo nwere ọrụ nke mere ya niile gburugburu ụwa, ọbụna Iran, na ọtụtụ nkwụsị na Europe n'ụzọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Ndụ mmekọrịta
N'ebe ọ bụla Player nke 1996 Olympics, e nwere ezigbo nwanyị ma ọ bụ nwanyị nwanyị, ma ọ bụ otú ahụ na-aga. Nye Taribo West, e nwere otu enyi nwanyị mara mma nke na-agba akwụna aha ya bụ Adenuke onye mesịrị ghọọ nwunye ya.
Ememe agbamakwụkwọ ha bụ ihe a na-apụghị ịkọwa ama ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'oge a na-eme ya. Atụmatụ na ndepụta ndị ọbịa mara ya site na nnọkọ oriri agbamakwụkwọ ndị ọzọ e mere n'oge ahụ. Otú ọ dị, n'izu atọ ka ha kekọtara eriri akpa ahụ, di na nwunye ahụ kewara. O mere na ihe kpatara ebubo na ebubo-ebubo nke ekwesịghị ntụkwasị obi.
N'izu atọ n'ime alụmdi na nwunye ahụ, ndị mgbasa ozi juru anya na Atinuke nke akwụkwọ akụkọ nke Taribo maka ileghara ọrụ alụmdi na nwunye ya anya na-ejedebeghị na batrị nwunye ya. N'aka nke ọzọ, Taribo kọwara alụmdi na nwunye ahụ dị ka ihe na-eme ihere, na-enyo enyo, ịkpọasị na enweghị ịhụnanya. O boro Atinuke ebubo na o kwenyeghi na nkwenye nke nkwa di na nwunye. Nke a biara n'otu oge, Atinuke ka a nụrụ na ọ ga-abụrụ onye na-azụkọ ego na-ewu ewu mgbe ọ nọ na-arụ ọrụ n'otu ụlọ akụ a ma ama na Nigeria.
Ihe dị iche n'etiti ndị nnọchiteanya ibe abụọ ahụ bịara bụrụ ndị a na-apụghị iru eru ma ha abụọ na-aga n'ụlọikpe maka ịgba alụkwaghịm nke mezuru. Ọ bụ ezie na a kọọrọ Taribo na ọ na-arụ ọrụ pastoral ya n'ọzọ ọzọ dị n'Ịtali, Atinuke kwagara n'ime mmekọrịta ọzọ.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Iji Charms na Babalawos
N'ebe ọdịda anyanwụ, West kwupụtara ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejide nkume ndị anwansi nke ọ nwetara site n'aka ndị dọkịta na-agwọ ọrịa tupu egwuregwu. Ọ gara n'iru ikwu na ọtụtụ ndị egwuregwu na ndị nkụzi anaghị ejikarị ndị amoosu. Mgbe Tana Ayejina gwara ya, onye na-ede egwuregwu maka akwụkwọ akụkọ Nigeria Punch ma ọ bụrụ na ọ nọ na-eme ihe ahụ mgbe ọ bụ ndị na-egwu ụkwụ, ọ zara ya n'ụzọ ziri ezi EE!. N'okwu ya ...
"Ee e, Amaghị m ihe kpatara ndị mmadụ ji jụ ịkọ banyere itinye aka na ha. Ngwá egwuregwu nwere ọtụtụ ike. Mgbe enwere nnukwu ihe omume, ị na-ele ebe egwuregwu ahụ, ị ​​na-ahụ ndị mmadụ, Fans na-akpọ ụdị ihe niile; ndị odeakwụkwọ enwere, ndị ọhụụ dị n'ebe ahụ. N'oge m na-egwu egwu, mgbe m na-amaghị ihe, ana m enweta ụfọdụ nwekwa na nnalawos (ndị dọkịta na-agwọ ọrịa) iji mee ka anyị nwee obi ụtọ, nke anyị weere gaa na ya (mba). Mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ, mgbe ụfọdụ ọ bụghị.
N'ọgbakọ ụfọdụ, tupu egwuregwu ọ bụla, onye isi oche ma ọ bụ onye ndú nke ụlọ ịgba chaa chaa ga-enye gị aka mara mma igwu egwu. Ha ga agwa gị ka ị tinye ya na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ sọks na egwu. Ọ bụ nkwenkwe nkwenkwe ụgha ha; na ọ pụrụ inyere ha aka imeri egwuregwu.
Enwere ụfọdụ ndị nkuzi ndị jikọtara na ndị anwansi na ndị ọkachamara n'Africa si Senegal, Burkina Faso, Zaire ma ọ bụ Nigeria. A na-elebara ndị a anya iji nye egwuregwu ndị a na-eduzi egwuregwu mgbe ọ na-egwu egwuregwu. Ndị a na-ahụ ihe ndị dị ịtụnanya na ha nwere ike ịgwa gị na anwansi na mkpuchi ha, ihe ga-esi na egwuregwu pụta. Ndị mmadụ kwere ma jiri ya. Ọ na-arụ ọrụ maka ndị kwere na ya. M hụrụ ya, ahụrụ m ya, mụ na ndị egwuregwu na-eji ya eme ihe ma ana m eji ya. Ya mere, gịnị mere ndị mmadụ ji jụ ya? Enwere obi ebere na ememe na football. Ọ ka dị. "
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Otu esi megharia ya
Mgbe nwanne nwanyị West na-akpọ Patience bụ onye na-ezisa ozi ọma, gara leta ụlọ ọhụrụ ya na Milan. Dị ka West na-etinye ya;
'Emeghere m ụzọ, tupu m nwee ohere ịsị na obi dị m ụtọ ịhụ ya, ọ sịrị:' Ị ghaghị ịdị ike ibi n'ụlọ dịka nke a. ' Ọ gwara m na ụlọ ahụ nwere ajọ akpụrụ, ma jụọ m ụdị ememe ndị m na-eme. Taribo West nwere iwe site n'okwu ya ma o kwuru ... "A sị na ọ bụghị nwanne m nwaanyị, agara m achụpụ ya."
Dị ka ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ, ọ bụ nnukwu nkwenkwe ụgha. Nwanne ya nwanyị nke Chineke gwakwara ya na ọ nwere ike inwe ike mgbaasị, ma kwuo na ya nwere ike ịhụ nkịta abụọ - otu ọcha na otu oji - na-alụ ya n'ụlọ ya. Nke a bụ mgbe ndị ịgba ọsọ na Taribo na-agbakwụnye. Ọ na-ewe iwe ngwa ngwa ma gwa ya na ọ ghaghị ịzụ ọzụzụ. Ndidi jisiri ike rue mgbe nwanne ya nwoke si n'inye ọzụzụ. Ọ malitere ikpegara Chineke ekpere ka o mee ka nwanne ya nwoke gbanwee.
Mgbe West laghachiri na ọzụzụ, nwanne ya nwanyị nwere ọtụtụ akụkọ. Mgbe ọ na-apụ, ọ na-ehi ụra ma nwee ọhụụ doro anya nke ịdị ọcha, na-agwa Taribo West na Chineke na-akpọ ya ka ọ hapụ ụzọ ndụ ọjọọ ya na-akọwa ihe ọ rọrọ banyere ya ma dọọ ya aka ná ntị ọzọ banyere ihe ndị ọ rụpụtara.
'Amatara m na enyemaka Chineke dị m mkpa,' Akọnuche West mere ka ọ kwupụta. Ya na nwanne ya nwoke gburu ikpere ya wee malite ekpere. Ka ha na-ekpe ekpere, ndị niile na-ese ihe n'ụlọ ahụ malitere imeghe ma mechibido ime mmụọ. Taribo na-echeta ozugbo ...
'Echere m na ọ ga-abụ naanị ifufe, mana ka echiche ahụ batara n'isi m, ọnụ ụzọ niile malitere ịbịakwa. Ọ dị ka ihe si na fim, mana m maara na ọ bụ eziokwu. Enwere m obi ụtọ n'ime. " Nke a bụ mgbe nwanne ya nwanyị tụgharịrị n'ebe ọ nọ ma kwuo, sị: "Taribo, Jehova kwuru na ị ga - abụ onye pastọ".
Nke a bụ mgbe ọ nwetara nickname ahụ 'Pastọ' dị ka ọ gwara onye ọ bụla ka ọ malite ịkpọ ya. Nwanne ya nyere ya ihe odide nke onye nkwusa nke dabeere na London, pastọ Ayo Don-Dawodu, okwu nkwupụta ya kwadoro okwukwe West ma mee ka ọ kwado ya Zọpụta na ozi Oké ifufe na Affori, nke dịpụrụ adịpụ nke Milan.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Ọrụ Pastoral na Nchịkọta
Ebe ọ bụ na nwanne ya nwanyị mesịrị gbanwee ya, onye mbụ na-agbachitere mba Nigeria malitere ozugbo ịkwado ekwensu ahụ ma nweta ihe onwunwe nye Jizọs na Ịtali.
N'oge na-adịghị anya Taribo West kwagara Lagos Nigeria iji guzobe alaka ụlọ ọrụ nke Milan Chebe na The Storm Miracle Ministries nke Mba Nile. Gbalịa dị ka i nwere ike, ị gaghị eche n'echiche Mario Balotelli na-eso otu ụzọ ahụ na Ghana.
Ọbụna mgbe ọtụtụ afọ gasịrị mgbe ọ lara ezumike nká na football, Taribo nọgidere na-ezukọta ndị na-eso ụzọ site na ịhazi mgbakọ ndị siri ike (nke dị n'okpuru) na Ajegunle, obodo kachasị ama nke Naijiria, ebe ọ bụ iji mee ka ndị omempụ na-ebi ndụ n'oge gara aga. Taribo enwere ike iweta $ 2million iji kwụọ ụgwọ maka ndị nọ n'okporo ámá Ajegunle.
Onye ọ bụla maara na ọ na-emesapụ aka ma na-agwa ndị mmadụ okwu ọma. Ọtụtụ oge, kama ịmepụta mgbasa ozi maka ịkụ nzọ, Taribo na-aga n'ihu maka ikwusa ozi dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Ụbọchị Ikpeazụ Mgbu
Na Jenụwarị 2007, West dị nso ịbanye na Rijeka club Croatia, ma ọ gwụrụ ahụike ya. N'ikpeazụ, ọ kwagara Iran wee banye otu nkwekọrịta otu afọ na Paykan na August 2007. N'ebe ọdịda anyanwụ, ọdịda anyanwụ amaliteghị na ụlọ ọrụ ahụ, na-enwe nkwekọrịta ya site na nkwenye ọ bụla nanị ọnwa atọ ka e mesịrị. Na February 2008, West na-ekwu na ha na-akpakọrịta na Segunda División club Xerez, ma onyeisi oche nke ụlọ ọrụ ahụ jụrụ ihe ọ bụla banyere ọbịbịa ya.
Mgbe ezumike nká, West kwuru ...'M ga-aga Milan ma bụrụ onye pastọ ọkachamara,' ọ na-ekwu. 'Enweghị m ike ịbụ onye nchịkwa. Nke a bụ njedebe nke football maka m ' Ọ na-achị ọchị na-eche banyere ya.
Taribo West Child Story Plus Ihe na -Mkparịta ụka afọ
Na 2010, a kọrọ na West na ndị ọzọ mba Nigeria, dị ka Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu na Obafemi Martins, dị ma ọ dịkarịa ala afọ asaa karịa ha kwuru. Na April 2013, Žarko Zečević, bụ odeakwụkwọ ukwu nke Partizan, kwuru na West bụ afọ 12 karịrị afọ ọ rịọrọ. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, West kwetara ebubo ahụ.
Zarko Zecevic gwara akwụkwọ akụkọ Serbia Vecernje Novosti: "[West] sonyeere anyị na ọ bụ 28. Naanị mgbe anyị chọpụtara na ọ bụ 40, ma ọ ka nọ na-egwu nke ọma, n'ihi ya, anaghị m akwa ụta maka ya. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nke Taribo West Child na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.